Posted by wai lin Tun at 5:07 PM Labels: ကဗျာ
အကိုကြီး ကဗျာက အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။
နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကိုတော့ အခိုက်ဆုံးပဲ :)
ကျနော်တို့က လူငယ်ကိုး ဆရာရဲ့ :P
ဒါပေမဲ့ အောက်ဆုံးအပိုဒ်ကို သိပ်နားမလည်ဘူး ကိုဝေလင်းရ။
မျက်စိတစ်ဖက်လပ်(တစ်ဖက်ကို သားရေပြားအနက်လေးဖုံးလို့ပေါ့)အဖြစ်နဲ့ သုံးလေ့ရှိတာကို တွေ့ဖူးပါတယ်။
ဆရာရဲ့ကဗျာ အောင်ဆုံးပိုဒ်အရောက် ဖျတ်ခနဲဆို အဲဒါလေးသွားမြင်တယ်ဗျ။ လူဆိုတာမျိုးက ကိုယ့်မှာ ခဲခဲဆစ်ဆစ်ကျန်နေခဲ့မယ် အသုံးဝင်မှုလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင် တယ်လဲတန်ဖိုးထားတတ်တာမျိုးလား။
အဲဒီလောက်တောင် ငါ မင်းကိုချစ်ခဲ့တာပါဆိုတော့
မဟုတ်ရင်တော့ ရှက်စရာကြီး :)
လွဲနေရင် မသိယောင်ဆောင်ပေးကြပါဗျို့ :P
ပင်လယ်ဓါးပြမှာလည်း စိတ်ကူးအိပ်မက်နဲ့ ပါပဲလား။
like Mayakovsky's leg in CLOCD IN TROUSERS!
the one who lost one leg
how he adores his the remain one!
this eye lel' MIKE PAR TEL" BYAR!!!
ကမ္ဘာကြီးကိုလုယက်ဖို့တောင် စိတ်ကူးဝံ့တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ သူရင်ထဲက နူးညံ့တဲ့ ချစ်တတ်သော နှလုံးသားကို မြင်အောင် ဖော်ကျူးနိုင်တာကို လေးစားအားကျလျက်…
အပြောကျယ်တဲ့ ပင်လယ်ကြီးကို ဖြတ်လာရတာ
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ မျက်လုံးတဖက်ကို လုယက်ချင်တယ် ဆိုရင်..